တရုတ်နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့်ဆံပင်အခြောက်ခံစက် RCY-67588B / D158 / RCY-568 ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စက်ရုံ | AOLGA
Wall-Mount ဆံပင်ခြောက်စက် RCY-67588B
အရည်အသွေးကောင်း 0.8L / 1.0L ဟိုတယ်လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုးနှင့် ...
တရုတ်အသေးစားဟိုတယ်ဒီဂျစ်တယ်ပေါင်းစပ်အီလက်ထရောနစ် Pas ...
နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည့်ဆံပင်အခြောက်ခံစက် RCY-67588B / D158 / RCY-568
လက်ကိုင်အဝတ် Steam Iron GT001
မြင့်မားသော torque ဆံပင်အခြောက်ခံစက် RM-DF15
1800W / 1200W high power
AC / DC မော်တာ
2 လေတိုက်နှုန်း options များ
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောလက်ကိုင်ကိုင်ထားသည့်ကိုယ်ထည်ဖြစ်ပြီးဆံပင်မထိခိုက်စေဘဲခြောက်သွေ့သောဆံပင်အတွက် 1800W စူပါပါဝါ
RCY-67588 နှင့် D158 သည်အရည်အသွေးမြင့် DC motor များနှင့် RCY-568 သည်အရည်အသွေးမြင့် AC motor ကိုအသုံးပြုသည်။
ဟိုတယ်များ၊ တည်းခိုခန်းများ၊ ကလပ်များနှင့်အခြားအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။
မိုက်ခရိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးခလုတ်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာအသုံးပြုရန်အထူးတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ဖြင့်တွန်းသောအခါဖွင့်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေသောအခါပိတ်ခြင်း၊ ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောဘေးအန္တရာယ်အန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားခြင်း။
• Coil spring power cable သည်ကောင်းမွန်စွာချဲ့ထွင်နိုင်ပြီး၊ နေရာလွတ်မလိုဘဲဆန့်။ မြန်ဆန်စွာကန်ထရိုက်နိုင်သည်။
•လေတိုက်နှုန်း ၂ ခု၊ ၂/၃ အပူချိန်ထိန်းချုပ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာများ
နံရံပေါ်ရှိဆံပင်အခြောက်ခံစက်များတွင်လေတိုက်နှုန်း ၂ ခုရှိသည်။
RCY-67588 နှင့် D158 တွင်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုသုံးမျိုးရှိပြီး RCY-568 တွင်အပူချိန်ထိန်းကိရိယာနှစ်ခုရှိသည်။
•ပါ ၀ င်သည့်နာမည်ကျော်အမှတ်တံဆိပ်အရည်အသွေးမြင့်အပူထိန်းကိရိယာသည်တိကျသောအပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးဆံပင်ကျန်းမာရေးအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အပူပေးသည်
•ပါ ၀ င်သည့်ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်အရည်အသွေးမြင့်အပူထိန်းကိရိယာသည်အပူချိန်ထိန်းညှိမှုနှင့်ဆံပင်ကိုအမြဲတမ်းအပူချိန်ထိန်းထားနိုင်ခြင်း
•ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ် DC / AC motor သည်မြင့်မားသော torque နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်သော
•လေတိုက်နှုန်း ၂ ခုနှင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုသုံးခု
အနက် / အဖြူ၊ မီးခိုးရောင်
စွမ်းအင်မြင့် 1800W / 1200W၊ AC / DC မော်တာ၊ လေတိုက်နှုန်း ၂ မျိုးနှင့် ၃/၂ အပူချိန်ထိန်းချုပ်နိုင်သောရွေးချယ်မှုများ၊
Gife Box အရွယ်အစား
ရှေ့သို့ အီလက်ထရောနစ်စကားဝှက်လုံခြုံမှု K-JG003
နောက်တစ်ခု: ၂၀၂၁ အရောင်းရဆုံး 1500WW ဖက်ရှင် Leafless ဆံပင်အခြောက်ခံစက် WY601-AOLGA
Q1 ။ သင်၏ကိုးကားစာရွက်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရနိုင်သနည်း။
ဖြေ။ ။ သင်၏လိုအပ်ချက်အချို့ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်သင်ပြောပြနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊
Q2။ မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ?
A.It သည်မော်ဒယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့ပစ္စည်းများတွင် MOQ လိုအပ်ချက်မရှိသောကြောင့်အခြားမော်ဒယ်များမှာ ၅၀၀pcs၊ 1000pcs နှင့် 2000pcs အသီးသီးဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက info@aolga.hk မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Q3 ။ ပေးပို့ချိန်ဘယ်လောက်လဲ
A. ပို့ဆောင်ချိန်သည်နမူနာနှင့်အမြောက်အများအမှာစာအတွက်ကွဲပြားသည်။ များသောအားဖြင့်နမူနာများအတွက် ၁ ရက်မှ ၇ ရက်နှင့်အမြောက်အများမှာယူရန် ၃၅ ရက်ကြာမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အားလုံးခြုံကြည့်လျှင်တိကျသောခဲအချိန်သည်ထုတ်လုပ်မှုရာသီနှင့်အမှာစာအရေအတွက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Q4 ။ ငါ့ကိုနမူနာပေးနိုင်မလား?
Q5 ။ ပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများတွင်အနီရောင်၊ အနက်ရောင်၊ အပြာစသည့်အရောင်အချို့ကိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သလား။
Q6 ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုကိုကရိယာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပုံနှိပ်လိုသည်။ မင်းလုပ်လို့ရလား
A. ကျွန်ုပ်တို့ logo OEM ပုံနှိပ်ခြင်း၊ လက်ဆောင်သေတ္တာဒီဇိုင်း၊ ပုံးဒီဇိုင်းနှင့်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲများပါ ၀ င်သော်လည်း MOQ လိုအပ်ချက်မှာကွဲပြားသည်။ အသေးစိတ်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။
Q7 ။ အာမခံကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။
နှစ် ၂.၂ နှစ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအပေါ်အလွန်ယုံကြည်မှုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားအလွန်ကောင်းစွာထုပ်ပိုးထားသဖြင့်များသောအားဖြင့်သင့်မှာကြားမှုကိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရရှိပါလိမ့်မည်။
Q8 ။ သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အောင်လက်မှတ်၏အဘယျသို့သောကြသနည်း
A. CE, CB, RoHS စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Professional က Wall တပ်ဆင်ထားပါးပျဉ်းဆံပင်အခြောက်ခံစက်
ဟိုတယ် Wall-Mount Hai ...
အမြင့် Torque ဆံပင်အခြောက်ခံစက် ...
ခေါက်သိမ်းနိုင်သော High Power Ha ...
အခန်း ၁၀၀၃၊ ၁၀ / F၊ မျှော်စင် ၁၊ Lippo စင်တာ၊ ၈၉ ကွင်း၊ Admiralty, Hong Kong